Galmada sheekada galmada
Rugta sheekaysiga galmada waa fursad lagu raaxeysto galmada dhijitaalka ah ee bilaashka ah iyada oo la adeegsanayo roulette-ka sheekaysiga fiidiyowga. Adag kuguma adkaan doonto inaad ka hesho gabadh ama nin galmo horteeda kaamerada webka magaaladaada. Waxa kaliya ee loo baahan yahay waa in la muujiyo jinsigaaga oo guji "Start Search". Kadib galmada jinsiga lafteeda ayaa bilaabi doonta inay soo bandhigto xulashada lammaanaha galmada. Ragga, sheekada sheekada lulataaye waxay soo bandhigi doontaa xulasho aad u fara badan oo gabdho ah oo loogu sheekeysto galmada, gabdhuhuna waxay kor u qaadaan lammaanahooda jinsiga ah ee ragga dhexdooda ah waxayna ku raaxeystaan ​​wadahadalkan xiisaha leh.
Roulette Ruush: shukaansiga khadka tooska ah ee internetka
Waxaa la bilaabay Noofambar 2009, Chatroulette.com ayaa la soo daayay habeenki - seddex bilood uun ka dib, laba daabacadood oo awood leh ayaa wax ka qoray: The New York Times iyo New York Magazine. Sheekada ay weriyeyaashu wariyeen waxay ahayd mid aad u xasuusinaysa xaqiijinta riyadii dhabta ahayd ee Mareykanka, sidaas darteedna wuxuu ku dhacay jacayl akhristaha reer galbeedka waxaana isla markiiba ku celiyay saxaafadda Ruushka.
Sheekadu waa sidan soo socota: 17-jir iskuuleyda Moscow ee Andrey Ternovsky, sida boqolaal carruur kale ah, wuxuu sameeyay degel uu kula xiriiro asxaabtiisa. Nuxurka fikraddu may ahayn in la doorto wada-hadal, maadaama lagu sameeyo nooc kasta oo is-gaadhsiin ah oo naloo yaqaanno, laakiin in "shil loo galo" isaga shil - aragtida abuureha mashruuca, aad iyo aad u xiiso badan. Waqti ka dib, barta, oo markii hore ay isticmaali jireen koox yar oo dad ah, ayaa caan noqotay. Ereyga afka ayaa ka fiicnaa xayeysiis kasta. Waa maxay xiisaha gaarka ah iyo xitaa wax yar oo la yaab leh: mashruucu wuxuu ku kasbaday sumcadiisa bilowga ah meel ka fog meeshii ay wax walba ka bilowdeen - kuma eka Ruushka, laakiin waa waddamada ku hadla Ingiriiska. Aagga CIS, kheyraadku kuma dhicin aagga aragtida dhagaystayaasha ballaaran illaa iyo xilligii ay warbaahinta reer Galbeedku wax ka qortey.
Marka, adoo ku qoraya magaca caanka ah ee hadda caanka ah cinwaanka cinwaanka, adeegsadaha waxaa loo qaadayaa bog leh is dhexgal aad u fudud. On the grey-white white, waxaa jira laba daaqad, mid kasta oo ka mid ah oo ay ku jiri doonaan sawir laga soo qaaday kamaradda webka. Bidixda waxaa ku wada hadlaya, midigta adiguna waa adiga. Dabcan, si adeeggu u shaqeeyo, waxaad u baahan tahay inaad haysato makarafoon, kamarad iyo xiriir internet deggan.
Adoo gujinaya batoonka "Ciyaarta Cusub", waxaad arki doontaa qofka kula hadlaya oo ama la sheekaysta waxyar, ama dhagsii "Next" oo waxaad heleysaa qof ka fiican. Si kastaba ha noqotee, xitaa haddii aad faraxsan tahay oo aad jeceshahay inaad ka wada hadasho arrintan iyo tan, sheekadu way joogsan kartaa, maadaama qofka "dhinaca kale ee internetka" uu isaguna xaq u leeyahay inuu doorto.
Falcelinta sida fudud, haddaanay ahayn adeeg aasaasi ah way ka fogayd madmadowga.
Dhowr warbaahin oo Ruush ah iyo shaqsiyaad wax ku qora baraha bulshada ayaa dhaleeceeyay shabakada Cahtroulette.com oo ay ku tilmaamtay "goob qalloocan". Tani ma aha xukun aan sal lahayn. Kaliya fiiri shaashadda kore si aad u ogaato inaadan arki karin oo keliya farxad, wajiyaal faraxsan, laakiin sidoo kale wax aan caadi ahayn. Waana iska fiicantahay haddii ay tahay dharka carnival ama toy jilicsan oo jilicsan. Xaqiiqdu waxay tahay booqdayaasha goobta ee aan xilkasnimada lahayn, iyagoo adeegsanaya magacyadooda, badiyaa waxay ku xad gudbaan xeerarka aasaasiga ah ee ku qoran bogga ugu weyn: "16 + iyo No Nudity".
Iyo "dibedda", liddi ku ah, "cun oo ammaan". Marka loo eego falanqaynta taraafikada websaydhka ee ay bixiso Kheyraadka Techcrunch, 47% dadka isticmaala ayaa ah Mareykan, waxaa ku soo xiga Faransiiska oo leh 15%, iyo Kanadiyaanka oo ku jira kaalinta saddexaad (in ka yar 10%). Tanina, guud ahaan, si fudud ayaa loo sharixi karaa - wakiiladda dalalkan waxay si fudud u bilaabaan wadahadal ay la wadaagaan rakaab diyaaradda ah, oo deris la ah makhaayadda, iyo guud ahaan waxay u furan yihiin isbarasho iyo wada sheekeysi aan caadi ahayn - oo ka duwan waddamadeenna.
Wadarta guud ee taraafikada goobaha ayaa horeyba uga badnaa afar milyan oo qof bishii, iyo socodka maalinlaha ah waxaa lagu cabiraa boqollaal kun. Markaad qiyaasto imisa qof ayaa khadka tooska ah ilbidhiqsi walba ku sameeya, aad ayey u adag tahay inaad hesho qof caan ah, qof aad muddo dheer rabtay inaad la xiriirto. Laakiin malaha. Dad badan oo caan ah ayaa qiraya in ay mararka qaar booqdaan goobta oo xitaa waqti ku filan halkaas ku qaataan.
Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood ka soo horjeedka ayaa dhacaya: qaar ka mid ah shakhsiyaadka aan la aqoon ayaa maareeya inay si dhab ah u helaan caan caan ah adduunka. Sida, tusaale ahaan, muusikiiste-improviser Merton, oo helay kumanaan dhagaystayaal mahadnaq ah baaxadda shabakadda.
Si ka duwan Chatroulette, oo loogu talagalay isticmaale shisheeye, mashruuca davaipogovorim.ru waxaa si gaar ah loogu dallacsiiyaa Runet. Ma qeexi doonno waxqabadka, maaddaama ay gebi ahaanba soo celineyso adeegga horey loo sharraxay, laakiin ogow in horumariyayaashu ay ku dareen hal faahfaahin oo aad u muhiim ah: codsi gaar ah oo loogu talagalay VKontakte, kaas oo kuu oggolaanaya inaad wadahadal la yeelato adigoon ka bixin "gurigaaga".
Cillada ugu weyn ee kheyraadka iyo arjiga (oo si isku mid ah ayey u shaqeeyaan) waa tirada yar ee isticmaaleyaasha. Intii lagu guda jiray tijaabada, durba gujiska shanaad ama lixaad waxaan rabay inaan ku dhawaaqo: "Bah! Dhamaan wajiyadii la yaqaanay!"
Dhawaanahan, sida akhristaheena feejignaanta leh u xusuusto, mid ka mid ah makiinadaha ugu waaweyn ee raadinta iyo marinnada waxqabadka badan - Mail.Ru - waxay furtay analoog u gaar ah oo ku saabsan sheekaysiga fiidiyowga ee caanka ah. Arrinta xiisaha lihi waxay tahay, haddii aadan hubin sanduuqa "Ku raadso oo keliya kamaradda webka" waqtiga, qofka wada hadlaya waa la baari doonaa oo keliya kuwa hadda adeegsanaya adeegga, laakiin dhammaantood, dhammaan, dhammaan dadka isticmaala Mail.Ru (kuwaas oo halkaas jooga) waa malaayiin badan), laakiin Tani waxay ka dhigan tahay inay suurta gal noqon doonto in la fiirsado sawirada avatar ee aan dhaqaaqa lahayn muddo dheer. Haddii kale, ma ogaan doontid wax farqi ah oo xagga shaqada ah.
Wadahadalkan aan caadiga ahayn wuxuu bixiyaa laba ikhtiyaar oo laga kala xusho: qoraal iyo fiidiyoow. Boggu si dhakhso leh ayuu u shaqeeyaa, waxaa jira dad badan oo isticmaala khadka tooska ah. Marka laga reebo helitaanka isgaarsiinta qoraalka, ma jirin farqiyo kale oo ka yimid Chatroulette.
Flytok.ru waa nooc adag oo midab badan oo isla sheekaysiga fiidiyowga ah. Markaad gasho goobta, waxaad isla markiiba arkaysaa laba foom - mid ka mid ah soo gal fudud, midka kalena diiwaangelin. Si kastaba ha noqotee, waqtiga imtixaanka, diiwaangelintu ma dooneynin inay si uun u shaqeyso, sida kala badh xiriiriyeyaasha isku xirnaanta ay sameeyeen. Marka waa inaan tixgelinno kaliya nooca "fudud" ee adeegga oo aan diiradda saarno fikradaha asxaabta.
Waxa ugu horreeya ee indhahaaga qabanaya: kheyraadku uma sahlana sida la moodo. Ma aha interface aad u cad la animation, diiwaangelinta loo baahan yahay. Ma ahan oo kaliya shisheeyayaal inay halkan ku soo ururaan, iyagoo doonaya inay is dhaafsadaan dhowr eray, laakiin waa dadka sida dhabta ah u daneeya xiriirka. Waad buuxin kartaa astaantaada, waxaad kasban kartaa saaxiibo, waad daawan kartaa baahinta, albumyada sawirada, aqrin kartaa iyo blog. Tirada dadka isticmaala bogga ayaa runtii ka liita Chatroulette, laakiin mararka qaarkood way ka fiicnaan kartaa adeeg kale oo Ruush ah. Adeegani waa mid aad ugu dhow shabakadda bulshada marka loo eego noocooda.
Isku mid ayaa laga dhihi karaa TinyChat Next - iyadoo la tixgelinayo inay tahay kheyraad shisheeye, iyo bulshada, iyo sidoo kale dadka isticmaala halkaas, inta badan waa ajnabi - kani waa wada sheekeysi fiidiyoow bulsho ah. Dadku uma yimaadaan degelkan daqiiqad, laakiin waxay u yimaadaan isgaarsiin buuxda. Soo gal, dooro beel oo bilow inaad ku sheekaysato mowduuca. Haddii aad rabto, waad isdiiwaangalin kartaa oo aad abuuri kartaa bulshadaada oo aad sugi kartaa inay kuwa kale ku soo biiraan. Waxaad sameyn kartaa diiwaangelin la'aan adoo ka galaya koontooyinkaaga Facebook ama Twitter.
Roulette sheekaysiga fiidiyowga - adeeg ku habboon shukaansiga khadka tooska ah
Qof kasta oo ku dadaalaya xiriir cusub, wuxuu rabaa inuu ka hadlo mowduucyo xiiso leh, saaxiibo la yeesho, la kulmo gabdhaha, waa inuu isku dayaa hab fudud oo sahlan oo shukaansiga khadka tooska ah - chat roulette. Kheyraadkan khaaska ah wuxuu u furayaa marin u helitaanka malaayiin isticmaaleyaasha Internetka ah, sida aad u xiisaynayso isgaarsiinta xiisaha leh, jacaylka iyo saaxiibtinimada. Xulashada wada-hadalku wuxuu u dhacaa si iskiis ah, wuxuu noqon karaa qof ka yimid Ruushka, Belarus, Jarmalka, Mareykanka iyo xitaa Australia.
Wadahadalka fiidiyowga ee gabdhaha ayaa u oggolaanaya ragga inay ku tababaraan xirfadahooda isgaarsiinta ee jinsiga ka soo horjeeda oo ay u sameeyaan saaxiibbada adduunka. Waxaa jirta fursad wanaagsan oo ka mid ah dhex dhexaadiyaashaas aan caadiga ahayn inay jiraan ruuxyo qaraabo ah. Wadahadalka Roulette ee gabdhaha waa kaaliye lagu kalsoonaan karo helitaanka naftaada saaxiib!
Sidee roulette chat video u shaqeeyaa
Qof kasta oo kumbuyuutarkiisu ku rakiban yahay kamarad fiidiyoow ah, makarafoon iyo ku hadlaba wuxuu marin u heli karaa isgaarsiinta khadka tooska ah ee aan xadka lahayn. Si kastaba ha noqotee, waa qalabkani kan suurtogal ka dhigaya in la baahiyo muuqaalka fiidiyowga lana sameeyo wadahadal.
Muhiim maahan in la galo magac, laakiin sheekada fiidiyowga waxay siisaa dadka isticmaala diiwaangashan fursado ka badan kuwa aan la aqoon. Si aad naftaada ugu muujiso iftiinkaaga ugu fiican, waxaa lagugula talinayaa inaad duubto fiidiyow soo dhaweyn gaaban.
Adoo gujinaya batoonka "Start Search", waxaad si otomaatig ah xubin uga noqonaysaa nidaamka. Sawir wada-hadal suurtagal ah ayaa ka muuqda daaqadda sheekaysiga fiidiyowga: waxaad aragtaa oo maqashaa qof, wuu ku arkaa oo ku maqlaa. Haddii shakhsiyadda wada-hadalka u muuqato mid aan fiicnayn ama aanad xiisaynayn, riix batoonka "Next" oo aad qof cusub.
Maxay yihiin faa'iidooyinka roulette ku sheekaysiga fiidiyowga
Ugu horreyntii, wada sheekaysiga fiidiyowga waa aalad loogu talagalay helitaanka aqoon-yahanno cusub oo loogu talagalay xiriir wanaagsan, fudud Ujeeddooyinka adeegsiga shaqadeena qof kasta oo gaar ah way ka duwanaan karaan.
Adeeggeena internetka wuxuu u saamaxayaa dadka isticmaala inay xalliyaan dhowr dhibaatooyin shaqsiyeed:
Ka gudubka dhismooyinka Xishoodka iyo xirfadaha isgaarsiinta oo yaraada ayaa nolosha aad u dhib badan. Wadahadalkeena fiidiyowga ah wuxuu caawiyaa helitaanka isku kalsoonaanta, barashada sida fudud ee loo galo wadahadalka, wadahadalka lala yeesho shisheeyaha iyo xitaa haasaawaha. Ka warqab la'aanta magaca qofka, ka-go'idda wada-hadalka shaashadda kormeeraha, iyo sidoo kale awoodda aad ku joojiso wadahadalka waqti kasta waxay ku siinaysaa dareen nabadgelyo waxayna kuu oggolaaneysaa inaad dareento degganaan iyo xorriyad badan.
Helitaanka labo. Wadahadalka Roulette ee gabdhaha wuxuu ku siinayaa fursad aad ku sameysato magac-wicitaan la'aan, xiriir khadka tooska ah ee khadka tooska ah, horumarkiisu wuxuu kugu xirnaan doonaa adiga oo keliya Waxaa laga yaabaa inaad aad isu jeclaan doontaan oo aad go'aansateen inaad ku wada hadashaan khadka qadka. Dad badan, sheekadeena fiidiyowga waxay noqotay goob kulan oo jacayl run ah leh.
Taageero nafsi ah. Xilliga adag, markii uusan jirin qof aad jeceshahay oo kuu dhow, ma sahlana inaad la qabsato dhibaatooyinka kaligood isdulsaaray. Xaaladaha noocaas ah, xitaa qof qalaad ayaa naftiisa u shubi kara, taageerada xagga akhlaaqda ah iyo talooyinka wanaagsan ee shisheeyaha ayaa noqon kara mid waxtar badan leh.
Sida loo helo saaxiibo cusub oo ku jira sheekada lagu wada sheekeysto
Way fududahay in la kulmo, in la yeesho wada sheekaysi, in la bilaabo xidhiidh ku jira sheekaysiga fiidiyowga. Ha ka xanaaqin marka wada hadalku hadalka joojiyo marka hore: waa wax aan macquul aheyn in la wada farxiyo gabi ahaanba. Wadahadalka fiidiyowga ah ee aan la yeelanno gabdhaha wuxuu ku siinayaa fursad aad kula xiriirto kumanaan qof. Isku day inaad u ekaato mid saaxiibtinimo leh, hufan, naxariis badan, caqli badan, u feejignaada wada hadalka, waxaadna hubaal la kulmi doontaa qof si dhab ah kuu xiiseynaya.
Noqo qof bulsheed, ha ka waaban inaad noqotid qofkii ugu horreeyay ee xiriir sameeya - oo dad cusub oo xiiso leh oo waxtar leh ayaa ka dhex muuqan doona noloshaada!
Wadahadalka Fiidiyowga RF © 2018
Sheekada ugu caansan ee fiidiyowga Ruushka!
Ma rabtaa dareemo dhalaalaya iyo raaxo shukaansi? Waxaan si aad ah ugu faraxsanahay inaan soo bandhigno sheekada fiidiyowga ee ugu dambeysay, guud ahaan - si aad uwanaagsan, oo si toos ah loogu talagalay helitaanka dadka isku fikirka ah iyo inaan waqti ku qaadno internetka. Khabiirkeena ku takhasusay guriga ayaa qoray naqshad xiiso leh: waxay leedahay isku xirnaan habboon, wax ku ool ah. Fududeynta maaraynta - waxay kuu oggolaaneysaa inaad waqti xiiso leh ku lumiso xayiraadda adag ee lala yeesho asxaabtaada ama dadka aad taqaanid ee cusub.
Sannad kasta, caan noqoshada ilaha ayaa kordha sababo la xiriira bixinta qalabka isgaarsiinta. Oggol - waa ku habboon tahay, dabcan gabi ahaanba waa la heli karaa in si qumman loola dhaqmo qof walba, adigoo jooga meelo kala duwan oo adduunka ah, adigoon ka kicin goobta shaqada (kombiyuutarka) ama laptop-ka. Waa in la ogaadaa in maalgashi maaliyadeed oo waaweyn aan loo baahnayn. Sida caadiga ah, lacag bixinta ayaa loo qaadaa iyadoo la adeegsanayo bixinta adeegyada isgaarsiinta, adeegga wada hadalka fiidiyaha. Minuscule-ka kharash gareeya lama barbar dhigi karo safar hal-bas ah oo bas yar.
Shirkadeenu waxay horey u sameysay codsi VKontakte ah oo dad badani u yimaadaan inay ku sheekaystaan. Runtii wax fiican ma tahay in saaxiibo loo helo wadaxaajood adigoo riixaya furaha orsada? Way fududaatay in la raadiyo dayax gacmeed. Nidaamka si weyn ayaa loo fududeeyay - si loo helo saaxiib naftaada ah adigoon qolkaaga ka bixin, waxaad hadda kadib ku caawin kartaa adeeg gaar ah. Nidaamka oo dhan waxaa lagu fulin karaa hay'adaha guurka ee noocan ah, iyo si toos ah - iyadoo lagu darayo. Maalin kasta, isticmaaleyaasha shabakadaha adduunka oo dhan waxay helaan dib-u-dhaqaajin si ay u daawadaan sheekooyin badan, laakiin kuma faani karaan dhagaystayaal badan ama ikhtiraac farsamo. Wadahadalkan fiidiyowga ah, iyo baloog isgaarsiin fudud oo fudud, iyo sheekooyin kale oo mawduucyo wata.
Muxuu ula sheekaysiga fiidiyow ee wehelka caadiga ahi yahay? Waxaad la kulmi doontaa oo keliya dadka jidka maraya, laakiin dadkaaga aad isku fikirka tihiin. Sidoo kale, adeegyada noocan oo kale ah waxaa bixiya mawduucyo: wadahadal loogu talagalay wadayaasha baabuurta, kaas oo ku takhasusay mowduucyada dhalinyarada, kulan loogu talo galay waayeelka, jiilka dhexe, iyo kuwa kale.
Isbarasho wacan oo ku saabsan sheekaysiga fiidiyowga ee Ruushka!
Waxaad maqashay 100% weedhahan: "Waxay ku kulmeen videochate waxayna guursadeen sanad kadib", ama tusaale ahaan: "saaxiibkiisii ​​ugu fiicnaa ayaa la kulmay". Ururo badan oo saaxiibtinimo, ururada jacaylka ayaa dib loo abuuray iyadoo la adeegsanayo World Wide Web, in kastoo dad badan, isku dayeen inay xiriir ku bilaabaan qaabkan isla mar ahaantaana, ku guuldareysteen, tuur shirkadan weligeed. Markaas xaggee si macquul ah loo dhammaystiray, daqiiqado sasabasho oo aad uwanaagsan oo ku jira sheekaysiga fiidiyoowga ah?
Kahor intaadan bilaabin, waxaad dooneysaa inaad dhahdo, mudnaanta ayaa ah dadka adkaysiga leh, maxaa yeelay waxaa jira dad badan oo isbaranaya iyagoo adeegsanaya wada sheekaysiga wada hadalka - way xishoodaan, mararka qaarkood xitaa wax yar oo aan kalsooni lahayn, waxay u badan tahay inaysan lahayn hammi weyn. Adiga oo si fiican u fikiray, waa muhiim inaad u kacdo tillaabadan, laakiin markaa maskaxda ku hay in laga soo bilaabo kii ugu horreeyay ee aad sheegto qoraalkaaga - waxaa lagugu xisaabin doonaa calaamadaha liis garaysan. Immisa qof - fikradaha badan, rabitaanka ... Ka dib oo dhan, waxaa jira qof raba inuu la kulmo dadka noocaas ah? Marka ha quusan isla markiiba.
Aad ayey u fududahay in lagu jabiyo fikirkaan ku-saleysan. Marka laga soo gudbo marxaladaha qaarkood, waraaqo kasta waxay ku dhowdahay in laga wada hadlo kulanka ka qaybgalayaasheeda. Hadday taasi timaado, howshu waa inay adiga kaa timaaddaa. Adeegsiga dhaqaaqan - muuji go'aan qaadasho, adkeysi.
Waa muhiim in la ogaado heerka: Iska ilow isticmaalka weedho qaabeysan. Run, marka laga reebo waxaa ku jiri kara kiisaskaas marka wada-hadalku go'aansado inuu marka hore isticmaalo. Waxba yeeli mayso in farriin kasta oo aad ka dhigto mid gaar ah oo xiiso leh markaad la hadlayso.
Qiyaas waxoogaa yar, mid ayaa xitaa oran kara - u maleeg naftaada halkii aad ka arki lahayd. Looma baahna in la bilaabo tirakoobyada "maran" oo aad u muuqato qaawan kamaradda agteeda! Waa lagama maarmaan in loo wajiho su’aasha si edeb leh, garsoor leh. Isku day inaad fikir ku abuurto si feker leh, u qor si sax ah. Si kastaba ha noqotee, tani waxay si weyn u kordhin kartaa xiisaha adiga.
Si fiican u fakar - ugu weyn ee codsi kasta sida:
- Daacadnimo. Isku day inaad daacad u ahaato sida ugu macquulsan. Hadaad balan sameyso, saaxiibkaa wuu niyad jabi karaa hadaad qishto. Xaaladdan oo kale, dadaalka ayaa noqon doona mid aan micne lahayn ...
Dadka la kulmay niyad jab aad u weyn - way yar yihiin iyaga, laakiin waxay ku kulmaan nolol maalmeedka. Badanaa doodaha ay soo bandhigeen dadkani waa: "Internetka, si kala duwan ayuu ila soo xiriiray ...". Haddii aadan rabin ereygan oo kale inuu ku khuseeyo - daacad noqo, laga yaabee xoogaa yar, dabcan ma ahan inaad ku xad gudubto sharciyada sheekada fiidiyowga ee Ruushka Videoruletka.in.ua!
Samee hadiyado fiican adoo iibsanaya qadaadiic.
Diyaar ma u tahay inaad isku daydo hadiyado? Tani waxay ka dhigan tahay inaad heshay mowduuc ku habboon fasax wada jir ah waana inaad iibsataa biil gudaha ah adoo adeegsanaya dalabka ay Bixisay Badanga Ltd. Haddii aad u baahato talo - ruushka fiidiyowga lagu sheekaysto ee "Videoruletka" wuxuu kugula talinayaa inaad isku dheelitirto dheelitirkaaga adoo adeegsanaya WebMoney, Qiwi, lacagta Yandex, kaar kasta oo Bangi ah. Xagga sare, waxaa jira xulashooyin habboon sida ay u kala horreeyaan, maxaa yeelay 10 qadaadiic ah (20 maalmood oo xiriir ah, haddii isla markaa aad isku daydo inaadan hadiyado ka helin wadnaha) adoo adeegsanaya nidaamyada elektiroonigga ah ee kor ku xusan - $ 10. Kuwani waa hababka ugu nabdoon, uguna faa'iidada badan, hab fudud, oo aan su'aalo ka soo bixi doonin.
Lacagta SMS-ka, dirista waxay aadeysaa lambar gaagaaban oo caadi ah. Badanaa waa wax aan faa'iido lahayn in lagu buuxiyo dheelitirka gudaha marxaladdan. Tani waa kaliya 4 qadaadiic ah macmiilka. Sidoo kale waxay kuxirantahay wadaha. $ 10, waxaa jiri kara toban qadaadiic ah, oo lagu buuxinayo kaarka bangiga. Intooda badani waxay sidaa ku bixiyaan xawaaraha iyo mobilka awgood koontada inta badan dib ayaa looga soo buuxiyaa. "Videoruletka" ayaa isbarbardhigtay, kadib markii ay go'aamisay in bixinta lambarka gaaban, dirista SMS ay tahay mid aan faa'iido lahayn, ka dib marka la diro farriin gaaban - lacagta badhkeed - waxaa ka qaadaya shirkad isgaarsiineed. Halkan waxaa ku yaal dhibaatada dhabta ah ee buuxinta ee lagu muujiyey 4, ma aha toban kopecks oo qarash gareyn qoto dheer leh. Si loogu sahlo ugu badnaan.
Sidee sheekada fiidiyowga ku timid?
Tan iyo muddadii uu Internetku dhashay, waxaan sidoo kale si xawli ah ugu soconaa horumarka sayniska iyo teknolojiyada ee ku saabsan xiriirka isgaarsiinta teknolojiyada casriga ah. Kuwo badan ayaa isku dayay inay allifaan dood noocan oo kale ah oo ka caawin doonta khadka tooska ah ee khadka tooska ah, xitaa si ka wanaagsan ayaa ah in la is arko. Fadlan la soco in wax walba ku dhacaan waqtiga dhabta ah. Dabcan, markii ugu horeysay, horumarin ayaa la soo muuqday dowladda, barnaamijyada noocan oo kale ah waxay ahaayeen kuwo aan la barbardhigi karin, oo loo kala saaray; waxaa loo adeegsaday tijaabooyin kala duwan iyo hawlgallada milatariga ee gobolka. heer. Midkii ugu horreeyay ee "saaxiibtinimo" wuxuu dib u dhashay 1988-kii, waxaa loogu yeeri jiray "Internet Relay Chat". Dabcan, cibaaro noocan oo kale ah oo duurka ku jirta: "Dhaqdhaqaaqa Dunida" isla markiiba wuxuu noqday mid caan ah. Mawduucan cusubi wuxuu aasaas u ahaa dhisidda qolalka lagu sheekeysto ee internetka.Waxay sameysay gaar ahaan aasaaska dhismaha wada sheekeysiga fiidiyowga. Ka dib casriyeynta, hagaajinta iyo kor u qaadista ilaha waxqabadka ee ay qoreen horumariyeyaasha farsamada, soo booqde kasta oo ku shaqeeya barnaamijka ugu dambeeyay wuxuu si fudud ula xiriiri karaa dhammaan noocyada wada sheekaysiga iyada oo aan wax dadaal ah la samayn.
Intii lagu guda jiray horumarinta barnaamijkan, noocyada hadda jira ayaa la ikhtiraacay. Sababtoo ah baahida loo qabo sawir "nool", waxaa loo baahday soo saarista qalab aan caadi ahayn - kamarad webka. Markii ugu horreysay, qalabkan, ama xitaa waad isbarbar dhigi kartaa "aaladda", waxay ahayd saddex sano ka dib muuqaalka barnaamijyada, taas oo ah, 1991 (maalmahan, ku dhowaad mashiin kasta oo feker ah ayaa tan ku qalabaysan). Hal-abuurnimadu waxay u oggolaatay qof kasta oo doonaya inuu sameeyo durdur maanta oo uu la xiriiro shakhsiyaadka ugaarsanaya ama, liddi ku ah, raadinta dadka aan la aqoon iyadoon guriga laga tegin. Waxaan si geesinimo leh u cadeyneynaa in dadka adeegsada sheekada fiidiyowga ay u mahadcelinayaan farsamadan yar sida kamarada webka. Aynu la wadaagno webcam-ka - mahadsanid!
Haddii aad ka fikirto, run ahaantii sheekaysiga fiidiyowga aan caadiga ahayn ayaa hoggaamiyaha ka ah qodobbada is-dhaafsiga macluumaadka ee la midka ah adoo u diraya ereyo Waad fikiri kartaa qof, waad ku maqli kartaa isaga oo awood u leh inuu wax qoro, hadlo, dareemo - isagoo fadhiya guriga. Hadda aan eegno faa'iidooyinka si isku xigxiga. Sharaf muuqata ayaa ah in la arko! Waad fikiri kartaa qofka kaa soo horjeeda. Markaad ku jirto wada sheekaysiga caadiga ah ama isla boggaga shukaansi ee caanka ah, haddii aad nasiib leedahay - waad ku faraxsan tahay inaad aragto sawir (ama sawir, looma reebayn) - halkan ayaad ku ilaalinaysaa oo waad hubtaa cidda aad la turjumayso. Waxaa jira tusaalooyin fara badan, waxaan u qaadaneynaa maskaxda tani war maahan, marka dadka soo booqanaya ay sawirro ka qaadaan dadka kale, laakiin waxaa jira sawirro tusaalayaal ah oo xiddigo ah oo aan aad loo aqoon. Dabcan, way adag tahay in lagu dhiirrigeliyo ficillada dadka kale, in la fahmo hadafka runta ah - annaga shaqsi ahaanteenna tani lama sharixi karosi kastaba ha noqotee, niyad-jabka natiijada hordhaca ah ee wada-hadalka noocaas ah ayaa iska cad. Oggol - intaad wada hadlaysid, waxaan horayba u ogaanay booqdaha, midabbo kala duwan sida aad rabto, oo ku saleysan sawirka macluumaadka dadweynaha ... dabeecadda, qaabka ... Waa wax aad u foolxun in goor dambe la ogaado inuusan u muuqan qofka lagu sawiray sawirka. Waxaan u maleynayaa inay ka xanuun badan tahay inaad u adkeysato xaqiiqda ah inaad ka fikirto inaad qof la noolaato, xiriir kasta oo waxtar u leh, waxaad ogaan doontaa jinsiga mana aha mid kaa soo horjeedda! Isku day inaad ka fikirto xaalada naxdin, dabeecad xumo ee sheeko xariiradiisa, oo bartay in ka dib wadahadalo dheer ka dib iyadoo la kaashanayo wadiiqooyinka gudbinta xogta, la kulmay boqolaal farriimo iyo farabadan oo qiiro khibrad leh leh ... ) doorashadu waxay ahayd mid weerara jinsiga ka soo horjeedka ah. Ma jecli inaan ku jiro xaalad noocaas ah - tani waa shaki la'aan.Oggol - intaad wada hadlaysid, waxaan horeyba u ogaanay booqdaha, midabbo kala duwan sida aad rabto, oo ku saleysan sawirka macluumaadka dadweynaha ... dabeecadda, qaabka ... Waa wax aad u foolxun in goor dambe la ogaado inuusan u muuqan qofka sawirka ka muuqda. Waxaan u maleynayaa inay ka xanuun badan tahay inaad u adkeysato xaqiiqda ah inaad ka fikirto inaad qof la noolaato, xiriir kasta oo waxtar u leh, waxaad ogaan doontaa jinsiga mana aha mid kaa soo horjeedda! Isku day inaad ka fikirto xaalada naxdin, dabeecad xumo ee sheeko xariiradiisa, oo bartay in ka dib wadahadalo dheer ka dib iyadoo la kaashanayo wadiiqooyinka gudbinta xogta, la kulmay boqolaal farriimo iyo farabadan oo qiiro khibrad leh leh ... ) doorashadu waxay ahayd mid weerara jinsiga ka soo horjeedka ah. Ma jecli inaan ku jiro xaalad noocaas ah - tani waa shaki la'aan.Oggol - intaad wada hadlaysid, waxaan horeyba u ogaanay booqdaha, midabbo kala duwan sida aad rabto, oo ku saleysan sawirka macluumaadka dadweynaha ... dabeecadda, qaabka ... Waa wax aad u foolxun in goor dambe la ogaado inuusan u muuqan qofka lagu sawiray sawirka. Waxaan u maleynayaa inay ka xanuun badan tahay inaad u adkeysato xaqiiqda ah inaad ka fikirto inaad qof la noolaato, xiriir kasta oo waxtar u leh, waxaad ogaan doontaa jinsiga mana aha mid kaa soo horjeedda! Isku day inaad ka fikirto xaalada naxdin, dabeecad xumo ee sheekadiisa sheeko xariirta ah, ee bartay in wadahadalo dheer ka dib caawinta wadiiqooyinka gudbinta xogta, ay soo mareen boqolaal fariimo ah iyo farabadan oo qiiro khibradeed leh ... indho indheyntiisa ) doorashadu waxay ahayd mid weerara jinsiga ka soo horjeedka ah. Ma jecli inaan ku jiro xaalad noocaas ah - tani waa shaki la'aan.ku tiirsanaanta sawirka macluumaadka bulshada ... dabeecadda, qaabka ... Waa wax laga yaqyaqsado in goor dambe la ogaado inuusan u ekaan qofka sawirka ka muuqda. Waxaan u maleynayaa inay ka xanuun badan tahay inaad u adkeysato xaqiiqda ah inaad ka fikirto inaad qof la noolaato, xiriir kasta oo waxtar u leh, waxaad ogaan doontaa jinsiga mana aha mid kaa soo horjeedda! Isku day inaad ka fikirto xaalada naxdin, dabeecad xumo ee sheeko xariiradiisa, oo bartay in ka dib wadahadalo dheer ka dib iyadoo la kaashanayo wadiiqooyinka gudbinta xogta, la kulmay boqolaal farriimo iyo farabadan oo qiiro khibrad leh leh ... ) doorashadu waxay ahayd mid weerara jinsiga ka soo horjeedka ah. Ma jecli inaan ku jiro xaalad noocaas ah - tani waa shaki la'aan.ku tiirsanaanta sawirka macluumaadka bulshada ... dabeecadda, qaabka ... Waa wax laga yaqyaqsado in goor dambe la ogaado inuusan u ekaan qofka sawirka ka muuqda. Waxaan u maleynayaa inay ka xanuun badan tahay inaad u adkeysato xaqiiqda ah inaad ka fikirto inaad qof la noolaato, xiriir kasta oo waxtar u leh, waxaad ogaan doontaa jinsiga mana aha mid kaa soo horjeedda! Isku day inaad ka fikirto xaalada naxdin, dabeecad xumo ee sheeko xariiradiisa, oo bartay in ka dib wadahadalo dheer ka dib iyadoo la kaashanayo wadiiqooyinka gudbinta xogta, la kulmay boqolaal farriimo iyo farabadan oo qiiro khibrad leh leh ... ) doorashadu waxay ahayd mid weerara jinsiga ka soo horjeedka ah. Ma jecli inaan ku jiro xaalad noocaas ah - tani waa shaki la'aan.Way ka xanuun badan tahay inaad u adkeysato xaqiiqda ah inaad ka fikirto inaad la noolaato qof, wixii xiriir ah oo faa'iido leh, waxaad ogaan doontaa jinsiga mana aha mid kaa soo horjeedda! Isku day inaad ka fikirto xaalada naxdin, dabeecad xumo ee sheeko xariiradiisa, oo bartay in ka dib wadahadalo dheer ka dib iyadoo la kaashanayo wadiiqooyinka gudbinta xogta, la kulmay boqolaal farriimo iyo farabadan oo qiiro khibrad leh leh ... ) doorashadu waxay ahayd mid weerartay jinsiga ka soo horjeedka ah. Ma jecli inaan ku jiro xaalad noocaas ah - tani waa shaki la'aan.Way ka xanuun badan tahay inaad u adkeysato xaqiiqda ah inaad ka fikirto inaad la noolaato qof, wixii xiriir ah oo faa'iido leh, waxaad ogaan doontaa jinsiga mana aha mid kaa soo horjeedda! Isku day inaad ka fikirto xaalada naxdin, dabeecad xumo ee sheeko xariiradiisa, oo bartay in ka dib wadahadalo dheer ka dib iyadoo la kaashanayo wadiiqooyinka gudbinta xogta, la kulmay boqolaal farriimo iyo farabadan oo qiiro khibrad leh leh ... ) doorashadu waxay ahayd mid weerara jinsiga ka soo horjeedka ah. Ma jecli inaan ku jiro xaalad noocaas ah - tani waa shaki la'aan.la kulmay boqolaal farriimo iyo fara badan oo qiiro khibradeed leh ... daawashada in xulashadiisu (iyada) uu ahaa mid weerara jinsiga ka soo horjeeda. Ma jecli inaan ku jiro xaalad noocaas ah - tani waa shaki la'aan.la kulmay boqolaal farriimo iyo fara badan oo qiiro khibradeed leh ... daawashada in xulashadiisu (iyada) uu ahaa mid weerara jinsiga ka soo horjeeda. Ma jecli inaan ku jiro xaalad noocaas ah - tani waa shaki la'aan.
Jooji! Isticmaalka Internetka ee 'Videochat' isgaarsiinta, waxaad si sahal ah uga fogaan kartaa daqiiqado aan fiicneyn. Sida ku jirta 5D - waraaqaha, sameynta xiriirka, isbarashada cajiibka ah - waxay ku dhacdaa jawi diirran sida ugu dhow xaqiiqda sida ugu macquulsan. Isku ekaanshaha dibada ayaa hortaada ah, sidaa darteed ma jiraan wax xitaa lagu daro maskax tababaran oo ka feker dhacdooyinka xun. Waxaad ku dhaqantaa farxad, intaad kalsooni buuxda ku qabtid, haddii aysan u ekaanin muuqaal ahaan dibedda, markaa daacadnimada ujeeddooyinka saaxiib ama saaxiib.
Wadahadal fiidiyow ah oo aan kala sooc lahayn iyo mabda'a fulintiisa.
Si aad u isticmaasho wada sheekaysiga fiidiyowga, waxaad u baahan tahay qaybaha soo socda:
- marka hore: laptop-ka shaqsi ahaaneed ee marinka u leh shabakadda (sawir ka helitaan wanaagsan iyo wada hadal dhexmara - algorithm-ka waa la soo dhaweynayaa: "xawaaraha ka sarreeya, ayaa ka sii cajaa'ib badan");